Tendonitis (Tendon(အရွတ်) တွေရောင်ခြင်း ) - Hello Sayarwon
Tendonitis (Tendon(အရွတ်) တွေရောင်ခြင်း )
Tendonitis (Tendon(အရွတ်) တွေရောင်ခြင်း ) ကဘာလဲ။
Tendinitis ဆိုတာ Tendon တွေရောင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ထိခိုက်မိခြင်းကိုပြောတာပါ။ Tendon ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ခန္ဓါက ကြွက်သားတွေကို အရိုးမှချိတ်တွယ်ပေးထားတဲ့ အမျှင်ပြားထူထူ(အရွတ်)တွေကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒီလိုမျိုး အရွတ်ရောင်ပြီဆိုရင်တော့ အရိုးဆစ်တွေကို ကိုက်ခဲ၊ ထိမရအောင် နာတာမျိုးတွေကိုခံစားရပါမယ်။ Tendinitis(အရွတ်ရောင်)ဟာ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရှိသမျှ အရွတ်တွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အများအားဖြင့်တော့ ပုခုံး၊ တံတောင်ဆစ်၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ ဒူးခေါင်းနဲ့ ဖနောင့်တွေမှာသာ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။
Tendinitis ဖြစ်ပုံအမျိုးမျိုးကို နာမည်သီးသန့်လေးတွေပေးထားတာရှိပါတယ်။
Tennis elbow (တင်းနစ်သမား တံတောင်ဆစ်)
Golfer’s elbow (ဂေါက်သမား တံတောင်ဆစ်)
Pitcher’s shoulder (ဘေ့စ်ဘော ပုခုံး)
Swimmer’s shoulder (ရေကူးသမား ပုခုံး)
Jumper’s knee ( အမြင့်ခုန် ဒူးခေါင်း)
Tendinitis ဟာ အရမ်းဆိုးရွားခဲ့မယ်ဆိုရင် အရွတ်ပြဲထွက်သွားတဲ့ထိဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Tendinitis အများစုကတော့ အနားယူခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်းတို့ နဲ့ နာကျင်မှုသက်သာသွားစေနိုင်ပါတယ်။
Tendonitis (Tendon(အရွတ်) တွေရောင်ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အသက်ရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမို သိနိုင်ရန် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ သွားရောက်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Tendinitis အများစုဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက် ကုသခြင်းနဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေက မပျောက်ပဲနဲ့ သင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေကို ရက်အနည်းငယ်လောက်ထိ ခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့သွားတွေ့သင့်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ရောဂါလက္ခဏတွေသော်လည်းကောင်း၊ မေးစရာ မေးခွန်းတွေသော်လည်းကောင်းရှိလာရင် ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကိုယ်ခနာဖွဲ့စည်းပုံခြင်းမတူညီပါ။ ဒါကြောင့်မို့ မိမိနဲ့ ဘယ်လိုကုသမှုပုံစံနဲ့သင့်တော်မလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Tendonitis (Tendon(အရွတ်) တွေရောင်ခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရုတ်တရက်ထိခိုက်မှုတွေကြောင့် Tendinitis ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ အများအားဖြင့်ဖြစ်စေတတ်တာကတော့ လှုပ်ရှားမှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကို ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေတက်တဲ့ အကျင့်မျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများကတော့ ထပ်ခါတလဲလဲလှုပ်ရှားမှုမျိုးတွေလုပ်ရဲတဲ့ အလုပ်တွေ ဝါသနာတွေကြောင့် အရွတ်တွေပေါ်မှာ ဝန်ပိလာပြီးတော့ Tendinitis ရောဂါဖြစ်လာတတ်ကြတယ်။
အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အလုပ်ကြောင့် လှုပ်ရှားရတဲ့ ပုံစံတွေမှာ စနစ်ကျတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပြုမူခြင်းဟာ အလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ ပုံစံမကျတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အရွတ်ပေါ်မှာ အဆမတန်ဝန်ပိလာစေပြီးတော့ Tendinitis ကိုဖြစ်လာစေတယ်။ (ဥပမာ – ပုံမမှန်တဲ့ပုံစံနဲ့ တင်းနစ်ရိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ tennis elbow)
Tendonitis (Tendon(အရွတ်) တွေရောင်ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Tendinitis ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိပါတယ်။
အသက် – အသက်ကြီးလာတာနဲ့မမျှ အရွတ်တွေက ပျော့ပြောင်းမှုနည်းလာခြင်းကြောင့် ဒဏ်ရာဖြစ်ဖို့ပို လွယ်လာပါတယ်။
အလုပ်အကိုင် – အောက်ပါအလုပ်အကိုင်မျိုးတွေ လုပ်တဲ့သူတွေ မှာ Tendinitis ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်
အားအလွန် သုံးရခြင်းအားကစားများ – ပုံစံတစ်မျိုးတည်းကို အကြိမ်များစွာလုပ်ရတဲ့ အားကစားများ၊ အထူးသဖြင့် နည်းလမ်းပုံစံမမှန်ခဲ့ရင် Tendinitis ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ ဘယ်လို အားကစားမျိုးတွေလဲဆိုတော့-
Tendonitis (Tendon(အရွတ်) တွေရောင်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်သီးသန့်နဲ့တင် tendinitis ရောဂါကို အတည်ပြုပေးလို့ရပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တခြားရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆရာဝန်က ထင်ခဲ့ရင် သင့်ကို X-ray ဓါတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
Tendonitis (Tendon(အရွတ်) တွေရောင်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နာကျင်မှုကို သက်သာစေပြီး အရွတ်ရောင်တာနည်းစေဖို့ပါပဲ။ Tendinitis ရောဂါကို ကိုယ်တိုင်ကုသနိုင်တဲ့နည်းတွေကတော့ ရေခဲကပ်ခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ခြင်း၊ အနားယူခြင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်။
Tendinitis အတွက် ဆရာဝန်က အောက်ပါဆေးဝါးများကို ညွန်းနိုင်ပါတယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး – Aspirin, Ibuprofen, naproxen စတဲ့ဆေးတွေက နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။
အရောင်သက်သာစေသော လိမ်းဆေးများ – ဥရောပမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးပြီးတော့ အမေရိကားမှာလည်း အသုံးများလာကြပါတယ်။ သောက်ဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမရှိပဲနဲ့ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေပါတယ်။
စတီးရိုက်ဆေးများ – ဆရာဝန်က အရောင်သက်သာအောင် အရွတ်ထဲကို စတီးရိုက်ဆေးကိုထိုးပေးပါမယ်။ စတီးရိုက်ကြောင့် အရောင်သက်သာပြီး အနာသက်သာစေပါတယ်။ နာတာရှည် Tendinitis ( ၃ လအထက်) ဆိုရင်တော့ စတီးရိုက်ကို ထပ်ခါထပ်ခါထိုးနေခြင်းဟာ အရွက်ကို ယိုယွင်းလာစေပြီးတော့ ပြတ်ထွက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
Platelet-rich plasma(PRP) – PRP ကုသနည်းဆိုတာ သင့်သွေးကိုနမူနာပုံစံထုတ်ယူပြီးတော့ Platelet(သွေးမွား) နဲ့ အနာသက်သာစေတဲ့ဓါတ်တွေကို ခွဲပစ်လိုက်ပါမယ်။ ခွဲထားတဲ့ သွေးရည်ကြည်ကို နာတာရှည် tendinitis ဖြစ်နေတဲ့ နေရာထဲကို ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
Tendinitis အတွက်သီးသန့်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကြွက်သား-အရွတ်စနစ်တွေကို ပိုရှည်လာပြီး အားပိုကောင်းလာတဲ့ အတွက် အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ ဥပမာ- အလယ်ဗဟိုပြုရှည်ထွက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ အရွတ်ရှည်နေတုန်းမှာ ကြွက်သားကို ကျုံစေတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ နာတာရှည် Tendinitis အတွက် အကျိုးအများရှိဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ သာဓကတွေရှိပါတယ်။
အရွတ်ဘယ်လောက်ထိ ဒဏ်ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတာမူတည်ပြီး ခွဲစိတ်ဖို့ လိုမလိုကြည့်ရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် အရွတ်က အရိုးပေါ်ကနေကွာကျသွားရင်တော့ ခွဲစိတ်ဖို့လိုနိုင်ပါတယ်။
နာတာရှည် tendinitis တွေမှာ focused aspiration of scar tissue (FAST) ဆိုတာကတော့ အထရာဆောင်းသုံးအသေးစိတ်ခွဲစိတ်မှုနည်းပညာတစ်ခုပါ။ ဘေးနားက အသားအကောင်းတွေကိုမထိစေပဲနဲ့ ခွဲစိတ်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေကို သုံးပြီးတော့ ပျက်စီးနေတဲ့အရွတ်တွေကို ထုတ်ပစ်တာပဲဖြစ်တယ်။
FAST နည်းပညာ ခွဲဖွင့်ပြီးသုံးတဲ့နည်းပညာနည်းနည်း ရလာဒ်ကောင်းပါတယ်။ ခွဲစိတ်ခန်းမထဲကို ဝင်စရာမလိုပဲ ထုံးဆေးပေးပြီး ခွဲယုံပါပဲ။ FAST နည်းပညာသုံးပြီးခွဲပြီးရင် ၁ လ ၂ လအတွင်း ပုံမှန်အလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Tendintis ကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါလူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက Tendinitis ကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
အနားယူခြင်း – နာကျင်တာနဲ့ ရောင်တာကိုပိုဆိုးစေနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ရှောင်ပါ။ နာနေတဲ့ကြားက အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ကစားခြင်းတွေမလုပ်ပါနဲ့။ တစ်ရှုးပြန်ကောင်းလာဖို့ မဖြစ်မနေအနားယူရပါမယ်။ အိပ်ယာထဲတော့ တစ်ချိန်လုံးလဲနေစရာတော့မလိုပါ။ ဒဏ်ဖြစ်နေတဲ့အရွတ်ကို မထိခိုက်နိုင်တဲ့ ပုံမှန်အပြုအမူတွေတော့ လုပ်နိုင်တယ်။ ရေကူးခြင်းနဲ့ တခြားရေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကစားနည်းတွေကိုတော့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရေခဲ – အနာနဲ့ ကြွက်သားအကြောဆွဲတာ၊ ရောင်တာ တွေကိုသက်သာစေဖို့ နာနေတဲ့နေရာကို မိနစ် ၂၀ ခန့် ခဏခဏ ရေခဲကပ်ပေးပါ။ ရေခဲကပ်ခြင်း ရေခဲနဲ့နယ်ခြင်း၊ ရေခဲရေ သော့သော့ချိုးခြင်းတို့လည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေခဲနဲ့နယ်ဖို့အတွက် ခဲနေတဲ့ပလတ်စတစ်ရေခွက်ပျော့ပျော့ထဲကို ရေထည့်ပါ။ ပြီးရင် အရည်ပြားနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိပေးခြင်းဖြင့် အနာသက်သာပါမယ်။
ဖိခြင်း – ဒဏ်ဖြစ်နေတဲ့ အဆစ်ရောင်ခြင်းကြောင့် လှုပ်ရှားမှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ပါ။ အဲလိုဖြစ်လာရင် အရောင်ကျတဲ့အထိ ဖိထားပေးပါ။ Compressive elastic bandages တွေနဲ့ ပတ်ပြီးထုတ်ထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
မြောက်ထားခြင်း – ဒူးခေါင်းမှာ Tendinitis ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ဖြစ်တဲ့ခြေထောက်ကို နှလုံးရဲ့ အပေါ်ဖက်ကို ရောက်တဲ့ အထိ မြောက်ပေးထားခြင်းဟာလည်း အရောင်သက်သာစေပါတယ်။
Tendinitis အတွက် အဓိက ကုသနည်းဟာ အနားယူခြင်းဖြစ်ပေမဲ့၊ အချိန်ကြာအနားယူခြင်းဟာလည်း သင့်ရဲ့ အဆစ်တွေကို တောင့်တင်းလာစေပါမယ်။ ဒါကြောင့် ရက်အနည်းငယ်နားပြီးရင်တော့ အဆစ်ကိုပျော့ပြောင်းစေဖို့ လှုပ်နိုင်သလောက်ရအောင် လှုပ်ပေးပါ။
as aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin IB, others), naproxen sodium (Aleve) acetaminophen (Tylenol) စစတဲ့ဆေးတွေကိုလည်း နာကျင်မှုသက်သာစေဖို့ တန်ပြန်တိုက်စစ်အနေနဲ့ သောက်လို့ရပါတယ်။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tendinitis/basics/definition/con-20020309. Accessed 13 Feb 2017.
http://www.webmd.com/fitness-exercise/arthritis-tendinitis#1. Accessed 13 Feb 2017.
3. Tendinitis (tendonitis): Symptoms, Causes and Treatments. http://www.medicalnewstoday.com/articles/175596.php. Accessed 13 Feb 2017.